အာဆင်နယ်အသင်း အောင်မြင်မှုနောက်ကွယ်က အမ်မရီရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်(၁)
အာဆင်နယ်အသင်းကို အကောင်းဆုံး ဦးဆောင်နေတဲ့ Unai Emery ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က ဘာများလဲ (၁)
9 Oct 2018 . 12:28 PM
အခုအချိန်မှာ Gunners ပရိသတ်တွေဟာ သူတို့အသင်းမှာ နှစ်ပေါင်း(၂၀)ကျော် အသုံးတော်ခံသွားတဲ့ ဂန္ထ၀င် နည်းပြကြီး အာစင်ဝင်းဂါး Arsene Wenger ကို သတိရ တမ်းတနေပါဦးမလား။ အာစင်ဝင်းဂါးအမည်နဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ဟာ အရောင်တွေ စတင်လွင့်ပျယ်လာချိန်မှာ ကြွားကြွားဝင့်ဝင့်နေရာ ယူလာတာက အူနိုင်းအမ်မရီ Unai Emery ဆိုတဲ့ အမည်နာမတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲစုံ နောက်ဆုံး(၉)ပွဲဆက် အနိုင်၊ ပရီးမီးယားလိဂ်အမှတ်ပေးဇယား အဆင့်(၄)ဆိုတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေက အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေ မြည်းစမ်းခွင့် မရတာကြာမြင့်နေပါပြီ။ အရင်လို ဖျော်ဖြေမှုရှိတဲ့ကစားဟန်ကို ပြန်မြင်နေရတဲ့အပြင် ရလဒ်ကောင်းတွေပါ ရယူနေတာကြောင့် Gunners ပရိသတ်တွေက ‘We’ve got our Arsenal back’လို့ ကြွေးကျော်နေကြပြီ။ ရာသီအစ (၂)ပွဲဆက် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးမှ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ပြန်ရောက်အောင် ဆွဲတင်ပေးခဲ့တဲ့ အူနိုင်းအမ်မရီရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က ဘာတွေများလဲ . . .
စပိန်လူမျိုးနည်းပြကြီးရဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တွေက အရင် အာစင်ဝင်းဂါးနဲ့ လုံးဝ ကွဲပြားသွားတယ်။ အူနိုင်းအမ်မရီက Training Plan တွေကို စေ့စေ့စပ်စပ် သတ်မှတ်ထားပြီး ကစားသမားတွေကိုလည်း လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းတယ်လို့ သဘောမထားဘဲ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလို အကြိတ်အနယ် ကစားစေတာပါပဲ။ သူက Training ဆိုတာက တကယ့်ပြိုင်ပွဲအကြို အသေးစားပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ခံယူထားတယ်။ နောက်ပြီး အမ်မရီဟာ သူလိုချင်တဲ့ Pressing Game ပုံစံ ကစားနိုင်ဖို့အတွက် ကစားသမားတွေကို သက်လုံကောင်းအောင်၊ နှလုံးအခြေအနေ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် နေထိုင်ရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတယ်။
နောက်ထပ် ပြောင်းလဲသွားတာက လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းတဲ့ အချိန်ပါပဲ။ အာစင်ဝင်းဂါးကိုင်တွယ်ခဲ့စဉ်က လေ့ကျင့်ခန်းအချိန်ကို မနက်(၁၀)နာရီ သတ်မှတ်ခဲ့ပေမယ့် အူနိုင်းအမ်မရီက နေ့လည်ပိုင်းမှ စတင်လေ့ရှိပြီး ကစားမယ့်ပွဲမတိုင်ခင် နာရီပိုင်း အလိုအထိ လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းစေတယ်။ အဲဒီလို လုပ်တာဟာ တကယ်ပွဲစတဲ့အချိန်မှာ အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့ အူနိုင်းအမ်မရီက ယုံကြည်ထားလို့ပါ။ အာစင်ဝင်းဂါးတုန်းက ဥရောပပွဲ ကစားပြီး နောက်တစ်နေ့မှာ လေ့ကျင့်ခန်း ပြန်လုပ်ခိုင်းလေ့ရှိပေမယ့် အမ်မရီကတော့ ဥရောပပွဲအပြီး နောက်တစ်ရက်ကို အားလပ်ရက်အနားပေးပြီးမှ လေ့ကျင့်ခန်း ဆင်းတဲ့ပုံစံ ကျင့်သုံးနေတယ်။
ထူးခြားတာ နောက်တစ်ခုက အမ်မရီဟာ ပွဲထွက်လူစာရင်းကို ပွဲရှိတဲ့ရက် မနက်ပိုင်းမှ ကစားသမားတွေကို အသိပေးတာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပွဲထွက်လူစာရင်းကို ကြိုအသိမပေးရင် ကစားသမားတွေကြားမှာ ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့အတွက် ပိုပြီး အကြိတ်အနယ်ကြိုးစားယှဉ်ပြိုင်စေချင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အူနိုင်းအမ်မရီက လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာ အာစင်ဝင်းဂါးလို လေပြေသွေးပြီး ကစားသမားတွေ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်အောင် နေတတ်တဲ့သူ မဟုတ်ပါဘူး။ အမ်မရီဟာ သူ့ နည်းပြအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူ ကစားသမားတွေကို ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် စောင့်ကြည့်နေတတ်သူပါ။ အဲဒီအတွက် တချို့ကစားသမားတွေကတော့ အူနိုင်အမ်မရီကို သိပ်သဘောမတွေ့ကျဘူး။
အမ်မရီဟာ စကားကို ဘွင်းဘွင်းပြောတတ်သူဖြစ်ပြီး တကယ်လို့ ကစားသမားဘက်ကလည်း ပြောစရာရှိရင် သူဆီ တဲ့တိုး ပြောခွင့်ရှိတယ်။ နောက်တစ်ခုက အမ်မရီဟာ အသင်းမှာ Untouchable Player မထားဘဲ အိုဇေးလ် Ozil ၊ ရမ်ဆေး Ramsey တို့လို ကစားသမားတွေကို လိုအပ်ရင် လူစားလဲဖို့ ၀န်မလေးပါဘူး။
အူနိုင်းအမ်မရီက အာစင်ဝင်းဂါးထက် ပိုပြီး အသင်းကိစ္စရပ်တွေမှာ ထဲထဲဝင်ဝင် သိအောင်ကြိုးပမ်းလေ့ရှိတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်မှာ အမ်မရီရဲ့ Training Sessions တွေက အာစင်ဝင်းဂါးတုန်းကလို တစ်ခါလာ မွဲပြာပုဆိုး မဟုတ်ပါဘူး။ နည်းစနစ်ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ကစားသမားတွေကို အချိန်ယူ အသေးစိတ်ရှင်းပြလေ့ရှိတယ်။
၀င်းဂါးနဲ့ ကွဲပြားသွားတာ နောက်တစ်ခုက အူနိုင်းအမ်မရီဟာ ကိုယ်နဲ့ကစားမယ့် ပြိုင်ဘက် နည်းစနစ်တွေကို ၀င်းဂါးထက် ပိုပြီး အာရုံစိုက်လေ့လာတာပါ။ မန်စီးတီးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ ရာသီအဖွင့်ပွဲမတိုင်ခင် အူနိုင်းအမ်မရီက မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ နည်းစနစ်အကြောင်းကို အသေးစိတ် ပြောပြခဲ့ချိန်မှာ ကစားသမားတွေတောင် အံ့အားသင့်ခဲ့ရတယ်။ ဒါဟာ အာစင်ဝင်းဂါး လက်ထက်မှာ တစ်ခါမှ မရှိခဲ့ဘူး။
ဒါတွေကတော့ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ နောက်ကွယ်က အူနိုင်းအမ်မရီရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် အပိုင်း(၁)ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း(၂)ကိုလည်း ဆက်ပြီးဖော်ပြသွားမှာဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုကြပါဦး . .
Photo:Fox Sports,squawka,Sky Sports,Getty Images,Arsenal True Fans,Arsenal.com
အာဆငျနယျအသငျးကို အကောငျးဆုံး ဦးဆောငျနတေဲ့ Unai Emery ရဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြက ဘာမြားလဲ (၁)
အခုအခြိနျမှာ Gunners ပရိသတျတှဟော သူတို့အသငျးမှာ နှဈပေါငျး(၂၀)ကြျော အသုံးတျောခံသှားတဲ့ ဂန်ထဝငျ နညျးပွကွီး အာစငျဝငျးဂါး Arsene Wenger ကို သတိရ တမျးတနပေါဦးမလား။ အာစငျဝငျးဂါးအမညျနဲ့ ဆိုငျးဘုတျဟာ အရောငျတှေ စတငျလှငျ့ပယျြလာခြိနျမှာ ကွှားကွှားဝငျ့ဝငျ့နရော ယူလာတာက အူနိုငျးအမျမရီ Unai Emery ဆိုတဲ့ အမညျနာမတဈခုဖွဈပါတယျ။
ပွိုငျပှဲစုံ နောကျဆုံး(၉)ပှဲဆကျ အနိုငျ၊ ပရီးမီးယားလိဂျအမှတျပေးဇယား အဆငျ့(၄)ဆိုတဲ့ စှမျးဆောငျရညျတှကေ အာဆငျနယျပရိသတျတှေ မွညျးစမျးခှငျ့ မရတာကွာမွငျ့နပေါပွီ။ အရငျလို ဖြျောဖွမှေုရှိတဲ့ကစားဟနျကို ပွနျမွငျနရေတဲ့အပွငျ ရလဒျကောငျးတှပေါ ရယူနတောကွောငျ့ Gunners ပရိသတျတှကေ ‘We’ve got our Arsenal back’လို့ ကွှေးကြျောနကွေပွီ။ ရာသီအစ (၂)ပှဲဆကျ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီးမှ လမျးကွောငျးမှနျပျေါ ပွနျရောကျအောငျ ဆှဲတငျပေးခဲ့တဲ့ အူနိုငျးအမျမရီရဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြက ဘာတှမြေားလဲ . . .
စပိနျလူမြိုးနညျးပွကွီးရဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးအစီအစဉျတှကေ အရငျ အာစငျဝငျးဂါးနဲ့ လုံးဝ ကှဲပွားသှားတယျ။ အူနိုငျးအမျမရီက Training Plan တှကေို စစေ့စေ့ပျစပျ သတျမှတျထားပွီး ကစားသမားတှကေိုလညျး လကေ့ငျြ့ခနျးဆငျးတယျလို့ သဘောမထားဘဲ ပွိုငျပှဲတဈခုလို အကွိတျအနယျ ကစားစတောပါပဲ။ သူက Training ဆိုတာက တကယျ့ပွိုငျပှဲအကွို အသေးစားပွိုငျပှဲတဈခုဖွဈတယျလို့ ခံယူထားတယျ။ နောကျပွီး အမျမရီဟာ သူလိုခငျြတဲ့ Pressing Game ပုံစံ ကစားနိုငျဖို့အတှကျ ကစားသမားတှကေို သကျလုံကောငျးအောငျ၊ နှလုံးအခွအေနေ အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ နထေိုငျရမယျလို့ သတျမှတျထားတယျ။
နောကျထပျ ပွောငျးလဲသှားတာက လကေ့ငျြ့ခနျးဆငျးတဲ့ အခြိနျပါပဲ။ အာစငျဝငျးဂါးကိုငျတှယျခဲ့စဉျက လကေ့ငျြ့ခနျးအခြိနျကို မနကျ(၁၀)နာရီ သတျမှတျခဲ့ပမေယျ့ အူနိုငျးအမျမရီက နလေ့ညျပိုငျးမှ စတငျလရှေိ့ပွီး ကစားမယျ့ပှဲမတိုငျခငျ နာရီပိုငျး အလိုအထိ လကေ့ငျြ့ခနျးဆငျးစတေယျ။ အဲဒီလို လုပျတာဟာ တကယျပှဲစတဲ့အခြိနျမှာ အထောကျအကူဖွဈစတေယျလို့ အူနိုငျးအမျမရီက ယုံကွညျထားလို့ပါ။ အာစငျဝငျးဂါးတုနျးက ဥရောပပှဲ ကစားပွီး နောကျတဈနမှေ့ာ လကေ့ငျြ့ခနျး ပွနျလုပျခိုငျးလရှေိ့ပမေယျ့ အမျမရီကတော့ ဥရောပပှဲအပွီး နောကျတဈရကျကို အားလပျရကျအနားပေးပွီးမှ လကေ့ငျြ့ခနျး ဆငျးတဲ့ပုံစံ ကငျြ့သုံးနတေယျ။
ထူးခွားတာ နောကျတဈခုက အမျမရီဟာ ပှဲထှကျလူစာရငျးကို ပှဲရှိတဲ့ရကျ မနကျပိုငျးမှ ကစားသမားတှကေို အသိပေးတာပါ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ပှဲထှကျလူစာရငျးကို ကွိုအသိမပေးရငျ ကစားသမားတှကွေားမှာ ပှဲထှကျခှငျ့ရဖို့အတှကျ ပိုပွီး အကွိတျအနယျကွိုးစားယှဉျပွိုငျစခေငျြလို့ပဲဖွဈပါတယျ။
အူနိုငျးအမျမရီက လကေ့ငျြ့ရေးကှငျးမှာ အာစငျဝငျးဂါးလို လပွေသှေေးပွီး ကစားသမားတှေ စိတျကွိုကျဖွဈအောငျ နတေတျတဲ့သူ မဟုတျပါဘူး။ အမျမရီဟာ သူ့ နညျးပွအဖှဲ့ဝငျတှနေဲ့အတူ ကစားသမားတှကေို ကွပျကွပျမတျမတျ စောငျ့ကွညျ့နတေတျသူပါ။ အဲဒီအတှကျ တခြို့ကစားသမားတှကေတော့ အူနိုငျအမျမရီကို သိပျသဘောမတှကေ့ဘြူး။
အမျမရီဟာ စကားကို ဘှငျးဘှငျးပွောတတျသူဖွဈပွီး တကယျလို့ ကစားသမားဘကျကလညျး ပွောစရာရှိရငျ သူဆီ တဲ့တိုး ပွောခှငျ့ရှိတယျ။ နောကျတဈခုက အမျမရီဟာ အသငျးမှာ Untouchable Player မထားဘဲ အိုဇေးလျ Ozil ၊ ရမျဆေး Ramsey တို့လို ကစားသမားတှကေို လိုအပျရငျ လူစားလဲဖို့ ဝနျမလေးပါဘူး။
အူနိုငျးအမျမရီက အာစငျဝငျးဂါးထကျ ပိုပွီး အသငျးကိစ်စရပျတှမှော ထဲထဲဝငျဝငျ သိအောငျကွိုးပမျးလရှေိ့တယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျးအစီအစဉျမှာ အမျမရီရဲ့ Training Sessions တှကေ အာစငျဝငျးဂါးတုနျးကလို တဈခါလာ မှဲပွာပုဆိုး မဟုတျပါဘူး။ နညျးစနဈပိုငျးနဲ့ ပတျသကျလို့လညျး ကစားသမားတှကေို အခြိနျယူ အသေးစိတျရှငျးပွလရှေိ့တယျ။
ဝငျးဂါးနဲ့ ကှဲပွားသှားတာ နောကျတဈခုက အူနိုငျးအမျမရီဟာ ကိုယျနဲ့ကစားမယျ့ ပွိုငျဘကျ နညျးစနဈတှကေို ဝငျးဂါးထကျ ပိုပွီး အာရုံစိုကျလလေ့ာတာပါ။ မနျစီးတီးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ ရာသီအဖှငျ့ပှဲမတိုငျခငျ အူနိုငျးအမျမရီက မနျစီးတီးအသငျးရဲ့ နညျးစနဈအကွောငျးကို အသေးစိတျ ပွောပွခဲ့ခြိနျမှာ ကစားသမားတှတေောငျ အံ့အားသငျ့ခဲ့ရတယျ။ ဒါဟာ အာစငျဝငျးဂါး လကျထကျမှာ တဈခါမှ မရှိခဲ့ဘူး။
ဒါတှကေတော့ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ နောကျကှယျက အူနိုငျးအမျမရီရဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြ အပိုငျး(၁)ဖွဈပါတယျ။ အပိုငျး(၂)ကိုလညျး ဆကျပွီးဖျောပွသှားမှာဖွဈလို့ ပရိသတျတှေ စောငျ့မြှျောဖတျရှုကွပါဦး . .